Waxbarasho – Hanoolaato Somalia National Party
January 1, 2019 jamalmahmed No Comments Waxbarasho waxbarasho
Hanoolaato way ogolaan doontaa waxbarasho lacag ah oo private ah hadii shirkadaha ama dadka bixin doona adeegaas ay kow diwaan gashan yihiin labo ay sharuudaha dowlada dhexe soo saarto waafaqsan yihiin sida matalan waxaan rabnaa in heerka waxbarashadooda ya dowladu ka kontoroosho. Waxaan kaloo laga rabaa in aysan wax lid ku ah qarannimada Soomaaliyeed ama caafimaadka ardayga waxba udhimaynin. Waxaa kale oo aan rabnaa in ay qasab noqoto maadooyinka ay dowladu waajibto ay dhigaan oo laga dhigo fasalada loogu talagalay. Matalan waa in ardahy kastaa uu bartaa luuqada Soomaaliga ah, taariikhada Soomaalida iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida. Waa sidaas oo kale ardayga la baraa akhlaaqda wanaagsan si waafaqsan diinteena Islaamka iyo dhaqankeena suuban iyo muwaadinnimada ay jiritaanka qarankeenu u baahan yahay. Waxaas oo dhan waxaa soo diyaarin doona aqoon yahan iyo culimadeena Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa ardaygu markuu waxbarashadiisa/teeda dhameysto uu aqoon lahaado uu xaquuqdiisa yaqaan, xaquuqda muwaadiniinta kale yaqaan, kushaqeysan karo muwaadiniinta kalena oo dalka lawadaaga si nabad iyo ixtiraam lehna kula dhaqmi karo.